China Diesel Generator N'ogbe Nrụpụta na Factory | Binuo
Diesel Generator N'ogbe
Diesel Generator Set bụ ngwaahịa nrụpụta ike dị elu, nke na-enye ike na-aga n'ihu maka ndị ọrụ dị iche iche. Enwere ike iji ya dị ka ihe mberede ma ọ bụ ike njikere maka iji nwa oge, ejirikwa ya dị ka 380/24 isi ike maka ịrụ ọrụ na-aga n'ihu. Ọnụ ego ntinye ego dị ala, yana ọnụ ahịa ọnụahịa arụmọrụ dị elu.
Iji mee ka afọ ju ndị ahịa chọrọ ka mma ma melite ọrụ nkwụsịtụ, Binuo Mechanics na-enye ọrụ ahịa ahịa Diesel Generator Set na Ezi Parts. Ọ na-abụ akara ama ama nke mba ofesi na ezigbo nkwa. Mechanics Binuo na-enyekwa ọrụ ịre ahịa na nrụzi.
Ụkpụrụ bụ isi
Ntọala mmanụ dizel na-atụgharị ike site na diesel ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. Na mmanụ dizel cylinder, ikuku dị ọcha na-agwakọta nke ọma na mmanụ dizel atomized dị elu nke a na-agbanye mmanụ ọkụ, mgbe ahụ, ụda ahụ na-ebelata ma okpomọkụ na-ebili ngwa ngwa site na piston n'elu extrusion ruo n'ebe mgbanye mmanụ dizel. Mgbe mmanụ dizel gbanyere ọkụ, gas agwakọtara na-ere ọkụ nke ukwuu na olu na-agbasa ngwa ngwa iji kwatuo piston a na-akpọ "ọrụ".
Silinda ọ bụla na-arụ ọrụ n'usoro, nke mere na mkpali na-eme na piston ghọrọ ike ịkwanye crankshaft site na mkpanaka njikọ. A na-arụnye ihe ọzọ na-emekọrịta ihe na-enweghị brush na-ejikọta ọnụ na crankshaft nke engine dizel, mgbe ahụ ntụgharị nke engine diesel na-ebugharị rotor nke generator. Dabere na ụkpụrụ Induction Electromagnetic, onye na-emepụta ihe ga-ewepụta ike electromotive na-ebute ma mepụta ugbu a na sekit ibu mechiri emechi.
Nke a bụ isi ụkpụrụ nke Diesel Generator Set ebe a. Iji nweta ike na-arụ ọrụ ma kwụsie ike, ọ dịkwa mkpa usoro nke engine diesel na njikwa generator, ngwaọrụ nchebe na sekit.
Nrụpụta mmanụ dizel nkịtị bụ akụkụ atọ mejupụtara ya: injin dizel, igwe ọkụ na sistemụ njikwa. E nwere ụzọ abụọ njikọ ụdịdị n'etiti dizel engine na generator, otu bụ mgbanwe njikọ na akụkụ abụọ na-jikọrọ site njikọ, na nke ọzọ bụ isiike njikọ nke na-eji elu-ike bolts na-etolite njikọ na isiike ejikọta ibe generator na. diski flywheel nke injin dizel. Njikọ siri ike nke igwe na-emepụta mmanụ dizel na-ejikarị eme ihe n'ahịa.
Mgbe ejikọrọ engine diesel na generator, a na-etinye ha na nkịtị n'okpuru etiti, ma kwadebere ihe mmetụta dị iche iche na-echebe dị ka ihe mmetụta okpomọkụ mmiri. Onye na-arụ ọrụ nwere ike ilele ọnọdụ ọrụ nke igwe dizel anya site na sensọ. Anyị nwekwara ike ịtọ oke elu maka sensọ, ya mere, usoro nchịkwa ga-enye mkpu n'ọdịnihu mgbe njedebe njedebe ruru ma ọ bụ gafere, ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ emeghị ihe n'oge, usoro nchịkwa ga-akwụsị ngwa ngwa. . Nke a bụ ụzọ igwe mmanụ dizel si echebe onwe ya.
Ihe mmetụta ahụ na-enweta ozi dị iche iche ma nye nzaghachi, na data niile ga-egosi na usoro nchịkwa nke mmanụ dizel generator. Usoro njikwa na-arụkwa ọrụ nchebe. A na-etinyekarị ogwe njikwa na generator, nke a na-akpọ ogwe njikwa azụ azụ, nwekwara ike ịbụ ụfọdụ ogwe ndị nwere onwe ha etinyere n'ime ụlọ ọrụ nke na-akpọ ogwe njikwa nkewa. Ogwe njikwa na-egosiputa paramita eletriki na engine diesel na-arụ ọrụ n'otu n'otu na eriri na-ejikọta generator na sensọ.
1. Ọtụtụ ọkwa nke otu generator ike site na ọtụtụ iri puku kwuru iri puku kW;
2. Nhazi kọmpat na ntinye na-agbanwe agbanwe, a pụrụ ịdabere na ya na nke dịgidere;
3. Ịrụ ọrụ ọkụ dị elu na obere mmanụ ọkụ;
4. Malite ma rute ike nchekwa ngwa ngwa;
5.Maintenance dị mfe na obere ọrụ;
6.The keukwu na-eri nke dizel generator set ewu na ike ọgbọ bụ kasị ala.
7.The ọnọdụ ọrụ na-agbanwe ntakịrị n'ime ngwa ngwa.
8.The na-emerụ umu anwuru dị ala na ezi ọkụ nchekwa.
Ebe a na-ewu ihe, ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri, ogbunigwe, ọdụ ọkụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akụ na ubi ndị ọzọ.
Nke gara aga: Ndị na-ebu ọnụ ahịa Nitrogen Membrane dị elu nke China - Nchacha hydrogen na Nitrogen - Binuo
Osote: Ikuku Compressor ahaziri
Mmiri oyi oyi
Ngwongwo mmiri oyi na-atụ oyi
Ọgbọ ike hydrogen, Hydrogen na Oxygen Generator, Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen osisi,